Ụdị na-adịgide adịgide: ihe ha bụ, otu esi eji ha na ihe atụ | Green Renewables
Portillo nke German | 18/05/2022 12:00 | Gburugburu
Ụlọ ọrụ ejiji bụ ụlọ ọrụ nke abụọ kacha emetọ ihe n'ụwa, ọtụtụ ụlọ ọrụ na ndị na-emepụta ihe na-akụkwa nzọ maka mmepụta nke ọma. Obi abụọ adịghị ya na ụlọ ọrụ ejiji na-atụgharị na ejiji ngwa ngwa n'afọ ndị na-adịbeghị anya ma akwụsịbeghị itolite. Ihe niile a mere ka e kere eke ika adigide nke na-ahụ maka nlekọta gburugburu ebe obibi na mbelata mmetụta gburugburu ebe obibi ha nwere.
N'isiokwu a, anyị ga-agwa gị banyere isi ihe na-adigide ụdịdị, àgwà ha na otú ha si enyere aka belata mmetụta gburugburu ebe obibi.
1 ika adigide
2 Ụdị kacha mma na-adigide
2.5 Ụlọ ọrụ Playa & Co.
2.9 uwe mwụda m
Afọ ole na ole gara aga, ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ gaghị ekwe omume ịzụta uwe na iyi ha maka oge mbụ kwa ụbọchị. Ọnụ ego na enweghị nnukwu agbụ ígwè, ịbụ ndị dị mfe ịnweta ma mara mma na ọha na eze, mere ka anyị mee mkpebi na-eche echiche karị mgbe ịzụrụ. Enweela mgbanwe ogo 180 ka oge na-aga. Ọ bụ ezie na nnukwu ụdọ akwa akwa na-eme obere ihe iji nyere aka na nkwado na ịmepụta mkpokọta capsule, a ka nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ.
Cheta, ụlọ ọrụ ejiji bụ ụlọ ọrụ nke abụọ kacha emetọ mmanụ na-esote mmanụ, na mbara ala anyị enweghị ike ikwe ka nnukwu ụdị na-emepụta uwe site na mpempe akwụkwọ na-atụleghị mmetụta dị ogologo oge na anyị. N'ihi nke a, ụfọdụ ndị na-emepụta ihe, ụlọ ahịa na ndị stylists kpebiri ịbanye n'ọrụ. na nkwado na nlekọta gburugburu ebe obibi dị ka ọkọlọtọ.
Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụdị na-adigide amabeghị nke ọma, ndị ahịa ha na-eji nwayọọ nwayọọ na-eto eto ma na-amalite ịghọta mkpa uwe anyị na-eme na ọnọdụ kachasị mma maka ndị ọrụ na ụwa. Nke mere na ụfọdụ ụlọ ọrụ ahọrọla imepụta mkpokọta na-adigide nke ha.
Na mgbakwunye na ịzụrụ uwe na-adịgide adịgide na ụfọdụ saịtị anyị na-akwado n'okpuru ebe a, ị nwere ike ịchekwa gburugburu ebe obibi site na ịga ụlọ ahịa vintage, ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ swapping ma ọ bụ ịgbazite uwe na ụfọdụ ngwa ndị na-aga nke ọma. Ihe ịrụ ụka adịghị ya na ichebe mbara ala taa na ime ihe ndị na-eme n’oge abụghị ihe na-ekwekọghị ekwekọ.
Na mba anyị, e nwere ọtụtụ ụdị na ụkpụrụ omume na-adịgide adịgide nke na-emepụta uwe na-adịghị mfe iji, kamakwa ọhụrụ. Anyị na-egosi gị ụfọdụ echiche nke ị nwere ike iji melite wardrobe gị mgbe na-enye mbara ala ezumike.
Ụdị kacha mma na-adigide
Ihe kacha mkpa maka ụlọ ọrụ a bụ iche echiche banyere ugbu a ịhapụ ezi ihe nketa maka ọgbọ ndị ga-abịa n'ọdịnihu. Lifegist zụtara Global Organic Textile Standard (GOTS) akwa agbaara agba na Europe, yana Madrid bụ ebe a na-emepụta uwe niile iji zere akara carbon nke mbupu.
Ecoalf eguzobewo onwe ya dị ka otu n'ime aha ndị a kacha mara amara na ejiji na-adigide na obodo anyị, ọbụna karịa oke ala anyị. Onye okike ya, Javier Goyeneche, chọrọ iji uwe ya gosi na ọ ga-ekwe omume ịnọgide na-enwe ezigbo mma na ezigbo ụtọ na-enweghị iji ihe ndị sitere n'okike eme ihe.
Akara a na-akwado 100% maka gburugburu ebe obibi. Nke mere na a na-emepụta akpụkpọ ụkwụ ha niile na Barcelona ma bụrụ ọrụ ndị na-arụ ọrụ nkà na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ mmepụta ihe dị nso Alicante, nke na-enye ha ohere ịlele ọnọdụ ọrụ na mmepụta mmepụta mgbe niile.
Maka oge ikpeazụ a, ha wepụtara akpụkpọ ụkwụ sitere na nopal ma ọ bụ ọka ọka, nke bụ ihe na-adịgide adịgide na vegan. Obi abụọ adịghị ya na echiche ọhụrụ na nke ọhụrụ ga-aga nke ọma.
Ụlọ ọrụ na-egwu mmiri nke Catalan dị njikere maka ihe ịga nke ọma ka oge okpomọkụ na-abịarute na njem n'ụsọ oké osimiri rutere. Onye na-emepụta iberibe ndị a bụ Peque de Fortuny, nke nwere oke mmasị jisiri ike mepụta mkpokọta ụlọ ịsa ahụ na-adịgide adịgide, nke a na-emepụta nanị na ụlọ ọrụ ya na Barcelona.
Ụlọ ọrụ Playa & Co.
Ọrụ ejiji ịdị n'otu a nke Cristina Piña mepụtara na-etinye uche na okike. N'iji uwe eji ihe eji eme ihe eji emeghari ihe eji emeghari ihe ndi ozo metụtara oke osimiri, usoro nke na-ebute nloghachi ma nyezie akụkụ nke uru ya na oru ngo, Playa agbanyela t-shirt nke nwere akara n'ime uwe kpakpando ya, kwa afo na-akpali ya site na ya. akara ngosi dị iche iche
Ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ ejiji ngwa ngwa, na-egosi na uwe nwere ike ịdịgide ma mara mma, ka ị na-ejigide ọnụ ahịa ọnụ ala ma na-agbaso usoro sitere na nnukwu ụdị. Na mgbakwunye, María Malo na-agba mbọ, na mkpọsa nke ọ bụla, maka ndị ahịa ya ịzụlite echiche nke maara ihe niile gbara ha gburugburu.
Ụlọ ọrụ ahụ erutela ọnọdụ siri ike na ụlọ ọrụ ejiji. Ndị na-emepụta ya sitere na Alicante ekpebiela ịga n'ihu n'otu nzọụkwụ n'ime ụwa na-adịgide adịgide ma na-enyocha ụzọ ọhụrụ nke ịmepụta na iji ihe ọhụrụ na-emepụta mkpokọta ha, n'agbanyeghị na nkwanye ùgwù zuru oke maka gburugburu ebe obibi.
Ọ bụrụ na ị bụ otu n'ime ndị na-enwe ekele maka ịdị iche nke uwe ọ bụla n'ime uwe gị, nke a ga-abụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na ọ ga-abụ ọkacha mmasị gị. Ọrụ a nwere naanị t-shirts nwere obere mbipụta nke ndị omenkà iri na abụọ si gburugburu ụwa sere.
uwe mwụda m
Ibe Skirts m niile ha bụ mbipụta nwere oke nke sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa anyị ịkwanyere akụ ndị sitere n'okike ugwu na ikike mmadụ nke ndị okike ya.
Ụlọ ọrụ Catalan na-etinye aka na njedebe nke iberibe ya, na-emepụta uwe dị mma nke na-agaghị apụ apụ. Site na ihe na-adigide dị ka ajị anụ na owu, akwa arụgharịgharị na mmepụta mpaghara, uwe CUS aghọwo ihe dị mkpa "ga-enwerịrị" n'ime uwe gị.
Akara Ecoology na-eji akwa eke, gburugburu ebe obibi na arụgharịgharị na-elebara anya nke ọma na nhazi ha, na-ahụ na ha ga-adị n'ime uwe gị ruo ọtụtụ afọ na-abịa.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dị mkpa iyi uwe na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi, ebe ọ bụ na ọ bụ otu n'ime ụlọ ọrụ ndị na-emetọ mbara ala ma na-erikarị ya kwa ụbọchị. Enwere m olileanya na site na ozi a, ị ga-amụtakwu banyere ụdị isi na-adigide yana ihe ahịrị ọrụ ha bụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » ika adigide
Ọ dị mkpa ka ụlọ ọrụ mara nke ọma na ọ dị mkpa ilekọta gburugburu ebe obibi. Maka m, ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-emetọ ihe kachasị na-emebi ụwa anyị.
Anyị niile kwesịrị ịma.